सलमान र ऐश्वर्याको ब्रेकअपको किस्सा सुन्दा तपाईको आँखाबाट आँसु आउनेछ….
June 6, 2020 1863
सलमान खानलाई बलिउडको सबैभन्दा विवा’दास्पद अभिनेता भन्दा फरक नपर्ला । अदालत’को मामिला बाहेक उनको प्रेम जीवन पनि धेरै पटक विवाहको शिकार बनिसकेको छ । धेरै अभिनेत्री’हरुसँग उनको नाम पनि जोडिसकेको छ र धेरै सँग ब्रेकअप पनि भईसकेको छ । जहाँ सम्म सलमान खानको ब्रेक’अपको कुरा गर्ने हो भने ऐश्वर्या’सँगको उनको ब्रेक’अपको चर्चा अहिले पनि बेला-बेला गरिन्छ ।
सलमान खान र ऐश्वर्या रायको प्रेम कहानी पूरा बलिउडमा सबैभन्दा लोकप्रिय थियो । यो भन्दा बढी प्रसिद्ध उनको ब्रेक’अपको हिस्सा भएको थियो । मिडिया’मा धेरै प्रकार-प्रकारका खबर’हरु आइरहेका थिए, तर जब ऐश्वर्या रायले पहिलो पटक सलमा’न खान र उनको ब्रेक’अपको बारेमा बताईन तब सत्य-तथ्य थाहा पाएर सबै दंग परेका थिए ।
ऐश्वर्या राय सलमान खानसँग डरको का’लो छायाँको साथ रहने गर्थिन् । सलमान खानले अक्सर आफ्नो चरित्रमा नराम्रो तरिकाले शंका गर्ने ऐश्वर्या रायले बताइन । यति मात्र नभई सलमान खानले रक्सी’को नशामा ऐश्वर्या’लाई निर्मम तरिकाले कुट’पिट गर्ने गर्थे ।
त्यस समयमा भारतीय समाचारपत्र’हरुमा प्रकाशित खबर अनुसार आफ्नो ब्रेकअपको त्यस भयान’क रातको बारेमा बताउँदै ऐश्वर्या’ले भनेकी थिईन कि, सलमान नशाको हालत’मा उनको घर आ’एका थिए र चिच्याउदै बेस्सरी ढोका ढकढकाउन थाले ।
ऐश्वयाले जवाफ चुपचाप बसे’पछि हातमा रगत नआउने बेलासम्म सलमानले ढोका ढकढकाइ रहे । यस पछि यस मामिलाले अझ उग्र रुप लियो । रातको उक्त डर’लाग्दो घटना पछि ऐश्वर्याको पिता’ले सलमान खान विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा गई उजु’री दिए ।
ऐश्वर्या राय आफूले सल’मान खानलाई खुसी राख्नको लागि हर सम्भव कोसिस गरेको तर सलमान खान उनी’सँग सधैंज’सो रिसाउने गरेको एक अन्तर्वार्ताको क्रममा सुनाइन ।
सलमान खानको यस प्रकारका हर्कतबाट वाक्क-दिक्क भई अन्त्यमा ऐश्वर्या राय’ले सलमान खानसँग’को सम्बन्ध समाप्त गर्ने निर्णय लिईन । परिवार निकट स्रोतका अनुसार ब्रेकअप पछि सलमान खानले ऐश्वर्या राय’लाई ज्यान मा’र्ने धम्की दिएका थिए । – बिगुल न्युज
Prevयी हुन् : बलिउडका ५ दाजुभाई र दिदीबहिनीको जोडी ! थाहा पाउनुहोस्..
Nextगगन थापा’को अन्तर्वार्ताको कमेन्ट हटाउन नायिका निशा अधिकारी’को पत्रकार’लाई अल्टिमेटम
ब्लाइन्ड डेटकी सिलु पुगिन् प्रियंकाको घर, प्रियंकाकी छोरी लाई दिइन् सुनको रिङ उपहार (भिडियोसहित)
कोरोनाले नेपालमा छैठौं व्यक्तिको निध’न
यी जोडीको टिकटकमा अनौठो हर्कत, एकाएक भाइरल बन्यो भिडियो (भिडियो सहित) (74010)